Izay fotsiny ?
Miarahaba sy mankasitraka anao aloha ry Jean nisolotena an’i Jeanne be niala tsiny taminay noho iny hagegeny iny.
Ho avy ilay andro…
Ho avy tsy ho ela ilay antoandro hafakely. Efa feno mpivarotra kiririoka sahady i Tsaralalana sy Analakely. Io manko ilay Dimy minitra hiarahan'ny rehetra mientana. Hanehoana faobe ny ady amin'ny tsy fahandriampahalemana.
Mihaingo ambony tsokoko
Miarahaba jean a, milamina tsara ve ianareoo ao sa ahoana e.Inona indray ity mikorapadrapaka ity e..dia mbola tsy hay tsara foana ve ry jean io asa io kanefa ny “mandat” efa ho tapitra a,Izaho ho aho impiry no efa niteny taminao hoe:
Nisotro ny aleoko maty
Miarahaba Jean a ! Tsy efa lasa any ivelany indray ve moa ianao izay e ? Tsy maninona fa hanoratra ihany aho satria fantatro fa tsy maintsy ho tonga any am-poto-tsofinao ny resako ato na ho ela na ho haingana. Milamina tsara ve ny ekipa ao ?
Ihomehezan’ny olona fotsiny
Eny ary ry jean a, tena ianareo izany no olona faran’izay mampihomehy eto amin’ny tanana e.Zesta teknika anie izany nataonareo izany nanao fahirano ny ombin-dry jean be ronono e.
Fetinareo omaly ra vehivavy andriambavilanitra. Hotahiana ianareo raha mbola eto ambany lanitra Reny nitaiza, nandrotsirotsy sy nananatra. Malefaka fiteny, ho ambinin-java-manasatra.
Diplaoma baoritra ..
Miarahaba jean a; nanahoana izany ianao nahazo diplaoma izany indray e.Dia tena maHery mihitsy aloha ianareo ra jean a, manangona baoritra etsy sy eroa.Ny manahiran-tsaina anay aty an-tanàna fotsiny dia toa be diplaoma tahaka anareo koa angamba ny dahalo sy jiolahy fa dia mahita paiakdy hamelezana anay fooana ry zalahy e.
Izahay anarany mba fety fa mitrongy vao homana hatrany e ! Tamin’ny krisimasy teo izao no nihinam-borona farany fa ny taorian’izay dia krizy mafy indray e ! Dia milibaliba be mihitsy ianareo ry Jean any amorontsiraka any a ? Sa efa niampita ranomasina indray miaraka amin’ny volanay ? Izay moa ry Jean afaka ho aiza a ! Ny eto ihany no ezahina atao manja e ! Ny anay tianay loatra ity tanindrazanay ity a ! Dia miato aloha izany ry Jean ny raharaham-pirenentsika ? Isika anie, hono, mbola mila miezaka mafy mihitsy e ! Fahenina avy any amin’ny farany, hono, isika nefa mahagaga f’ianareo toa mbola sahy matoritory. Izaho aloha dia mirary anareo ho afa-bizana e ! Mirary anareo koa mba hahita vahaolana amin’izay amin’ny taona ho avy.